Iko kudiwa kwekushandisa VPN pane iyo iPhone | IPhone nhau
Iko kudiwa kwekushandisa VPN pane iyo iPhone
Sezvo makore anopfuura uye tinoona sei data redu rave chinhu chechishuwo Pane chikamu chemakambani makuru eetekinoroji, hurumende kana chero mumwe munhu kana muviri une zvido zvakavanzika, zviri kuramba zvichijairika kuona mashandisiro anoita vashandisi kuchengetedza uye kuchengetedza kwavo zvakavanzika.
Haisi yekumira kushandisa Facebook, kana tichizoenderera tichishandisa Google kutsvaga nekuti pakupedzisira zvese zvinozivikanwa. Pane nzira dzakasiyana dzekuchengetedza zvakavanzika zvedu kana tichitaurirana nevamwe vanhu kana kubhurawuza internet. Kana zvakavanzika zvichikosha, saka kukosha kwekushandisa VPN ye iPhone.
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuve takajeka nezve chinonzi VPN uye kuti inoshanda sei. VPN ndicho chirevo cheVirtual Private Network (virtual private network) zita iro inotsanangura zvakajeka kuti chii uye chii chainotipa.
1 Mashandiro anoita VPNs
1.1 Bhurawuza zvakachengeteka uye pasina kusiya trace
1.2 Darika miganhu yenyika
1.3 Bypass ISP zvinorambidzwa
2 Asi hazvisi zvese zvakanaka
2.1 Ivo havana kusununguka
2.2 Kubatanidza kumhanya kwaderedzwa
2.3 Izvo hazvina kufanana neasingazivikanwe kubhurawuza
3 Maitiro ekumisikidza VPN pane iyo iPhone
Mashandiro anoita VPNs
Bhurawuza zvakachengeteka uye pasina kusiya trace
Kuti uverenge ichi chinyorwa, nharembozha yako kana komputa yakabatana neinternet, kungave kuburikidza nekubatana kwedata kana kuburikidza netiweki yeWi-Fi. Kamwe kubatanidza kwadzosimbiswa, chishandiso chako chatumira chikumbiro kune yako ISP (internet mupi) uyo anotarisira kukupa iwe izvo zvirimo. Chikumbiro ichocho inochengetwa muinternet yako mupi uye inosanganiswa neIP yako / mudziyo.
Kana iwe ukashandisa VPN kubatanidza kune internet, yatove kubva kune yako iPhone kana komputa, zvese zvikumbiro zvaunoita painternet zvinozotungamirwa kuVPN iyo ichave inotungamira yekudzorera iyo yakakumbirwa ruzivo kuitira kuti wako Internet mupi haazomboziva chero nguva ndeapi mapeji aunoshanyiraChii chaunotora kana uri kunyatsoshandisa internet?
Aya marudzi ekubatanidza agara achidhura zvakanyanya uye anga achiganhurirwa kunzvimbo dzehunyanzvi, nekuti zvinovatendera kuti vasvike kure kure data rese sekunge vari mumahofisi. Neraki, mashandiro aya anga achideredza mutengo wawo sezvo kudiwa neruzhinji kwakawedzera.
Darika miganhu yenyika
VPNs chinoshandura dunhu kwatinofamba nenzira iyoyo svetuka ganhuriro dzenzvimbo dzatinogona kuwana kana zvasvika pakutarisa mavhidhiyo paYouTube, kuwana zvirimo kubva mukushambadzira masevhisi mune dzimwe nyika kana kusvetuka zvirambidzo zvinoiswa nehurumende pakubhurawuza mune dzimwe nyika, chimwe chinhu chakajairika kunyanya muRussia neChina, saka mhando iyi yemasevhisi inorambidzwa zvachose.
Bypass ISP zvinorambidzwa
Mune dzimwe nyika vatengesi veinternet vanogona kudzora zvakananga kana kuvharira P2P kunyorera, maapplication anotibvumidza kurodha chero mhando yezvinyorwa, kwete chete mafirimu uye akateedzana. Tinogona kudzivirira izvi zvisingagoneki nekushandisa VPN masevhisi.
Asi hazvisi zvese zvakanaka
VPNs imhando yemugero unotibvumira dzivisa kusiya chiratidzo chezviitiko zvedu pane yedu ISP uye svetuka kurambidzwa kwenzvimbo. Asi izvi zvine zvinoverengeka zvinokanganisa.
Ivo havana kusununguka
Chekutanga, VPNs HAZVINA kusununguka uye sevhisi inovapa nenzira iyi inonyepa. "Mahara" VPNs haasi maNGOs uye vanofanirwa kuita mari neimwe nzira. Akazviita sei? Kutengesa nematanda ako ekuvhura.
Ruzivo irworwo zvingaratidzika sezvisingakoshi kunyange kwauri, yakakosha kwazvo kumakambani echitatu-bato anomhanyisa mabhizinesi ekushambadzira. VPNs dzinobhadharira kupa masevhisi avo dzinozvipira kusachengeta zvinyorwa zvezviitiko zvedu chero nguva, saka havagone kuchinjanisa nazvo.
Kufunga ruzivo urwu, iwe unofanirwa kunyatso kujekesa nezve makambani eVPN Ivo vanotipa isu chengetedzo huru kana tichiishandisa.
Kubatanidza kumhanya kwaderedzwa
Patinobatana neVPN tiri kushandisa IP kubva kune imwe nyika, saka kubatanidza kumhanya kunogara kuchiderera kwatinogona kuwana chibvumirano chakananga. Usatarisira kuzokwanisa kutarisa 500MB kuburikidza neVPN kunze kwekunge iwe uchibhadhara mamirioni mwedzi wega.
Izvo hazvina kufanana neasingazivikanwe kubhurawuza
VPNs inotibvumidza kuti tirege kusiya zvisaririra zvezviitiko zvedu pane yedu internet mupi, asi usadzivise kusiya zvisaririra zvekufamba kwedu mubrowser kana chishandiso chatinoshandisa. Iyo chete nzira yekusiya isina trace ye yedu yekutsvaga nhoroondo ndeye kushandisa iyo Tor browser.
Maitiro ekumisikidza VPN pane iyo iPhone
Kugadzira VPN pane yedu iPhone chinhu chiri nyore kwazvo uye hachidi ruzivo rwakakura. Kana sevhisi ichi inowanikwa kuburikidza nechishandiso chinowanikwa muApp Store, isu tinongofanirwa kudaro dhawunirodha iyo app uye unomhanya kuti utange kubatana kwakachengeteka pakati pechigadzirwa chedu nebasa ratakabata.
Kana, kune rumwe rutivi, isingawanikwi, isu tinongofanirwa kuenda ku Zvirongwa kubva kumagumo edu, tinya pa General uye gare gare VPN. Tevere, isu tinofanirwa kutanga tasarudza mhando yeVPN. Tevere, isu tinofanirwa kuisa iyo data inoenderana nebasa redu senge sevha, iyo iri kure ID, ID yemuno pamwe neyakavimbika data yeaccount yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Iko kudiwa kwekushandisa VPN pane iyo iPhone
Iko kune zvakare sarudzo yeako wega VPN server. Ndine imwe yakaiswa paSynology NAS (ndinofungidzira mamwe mabhureki anogona zvakare) kana kuiisa pane Raspberry Pi. Inoshanda sengano kwandiri.
Apple inotsanangura MFi zvinodiwa zvekupenya izvo zvinogona kuwiriraniswa neiyo iPhone
AirPods Pro inovandudza latency pamusoro pemhando yapfuura